युरोकपमा डेनमार्कलाई हराउँदै बेल्जियम नकआउट चरणमा प्रवेश - समय-समाचार
समय-समाचार शुक्रबार, २०७८ असार ४ गते, ०७:३९ मा प्रकाशित
Belgium's goalkeeper Thibaut Courtois celebrates after the Euro 2020 soccer championship group B match between Denmark and Belgium, at the Parken stadium in Copenhagen, Thursday, June 17, 2021. Belgium won 2-1. (Wolfgang Rattay, Pool via AP)
काठमाडौं । युरोकप फुटबल अन्तर्गत गएराति भएको दोस्रो खेलमा बेल्जियम नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको छ । बेल्जियमले डेनमार्कलाई उसकै घरेलु मैदानमा २–१ ले गोल अन्तरले पारजित गर्दै नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको हो ।
बेल्जियमका लागि थोरगन हजार्डले ५४औं र केभिन ब्रुएनले ७०औं मिनेटमा गोल गरेका थिए । डेनमार्कले १ गोल गर्यो । खेलको सुरवातमै डेनमार्कले गोल गरेको थियो । डेनमार्कका लागि युसुफ पोल्सेनले गोल गरेका थिए ।
समूह ख मा बेल्जियम र डेनमार्क सहित रसिया र फिनल्यान्ड रहेका छन् । बेल्जियमले दुई खेल खेलेर ६ अंक बनाएको छ भने २–२ खेल खेलेका रसिया र फिनल्यान्डको समान ३ अंक छ ।
बिहीबार नै सम्पन्न पहिलो खेलमा युक्रेनले उत्तरी मेसेडोनियालाई २–१ गोल अन्तरले पराजित गरेको छ ।